အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဖြစ်လာသော 23W TWENTY-THREE | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဖြစ်လာသော 23W TWENTY-THREE
October 27, 2009 — mmweather
အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ အမည်မပေးရသေးတဲ့ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း 23W TWENTY-THREE ဟာ အခုအချိန်မှာ ဂူအမ်ကျွန်းနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်နေရာကနေ အနောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွေ့လျားနေပါတယ်။ 23W ဟာ ဒီနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက် နံနက် ၆း၃ဝ နာရီ မှာ ရရှိတဲ့ data တွေအရ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ရဲ့ အရှေ့ဘက် မိုင် ၁၆ဝဝ ခန့်မှာဗဟိုပြုနေကြောင်း သိရပါတယ်။
လတ်တလောအချိန်မှာ အနောက်-အနောက်မြောက်ယွန်းယွန်းကို တစ်နာရီ ၁၉ မိုင်နှုန်းနဲ့ ရွေ့လျားနေပြီး၊ မုန်တိုင်း ဗဟိုမှာ လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီကို မိုင် ၄ဝ မှ မိုင် ၅ဝ အထိရှိနေပါတယ်။
လာမဲ့ ၅ ရက်အတွက် WUND က ခန့်မှန်းပုံဖေါ်ထားတဲ့ အခြေအနေအရ အောက်တိုဘာ-၃ဝ ရက် သောကြာနေ့မှာ အဆင့် ၄ ရှိတဲ့ စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီးဖြစ်လာကာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို မြို့တော်မနီလာရဲ့မြောက်ဘက်ကနေပြီး ခါးလည်က ဖြတ်တိုက်မဲ့ အနေအထားမျိုးတွေ့နေရပါတယ်။
TSR data မှာတော့ အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၆း၃ဝ နာရီ (လာမဲ့ ၉၆ နာရီမှာ အဆင့်-၄ စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဖြစ်ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပြီး မနီလာမြို့ရဲ့ အရှေ့မြောက်ဘက် ၁၃၅ မိုင်ခန့်ကို ရောက်ရှိလာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ အခုလိုခန့်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းသာဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် လာမဲ့ ၉၆ နာရီမတိုင်မီမှာဘဲ ဖိလစ်ပိုင်ကမ်းရိုးတမ်းဒေသဟာ အဆင့်-၄ စူပိုင်တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းရဲ့ တိုက်ခတ်မှုကို ခံကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး 23W ကို ဘယ်လို အမည်ပေးမယ်ဆိုတာနဲ့ ဘယ်လိုအဆင့်အထိဖြစ်လာဦးမယ် ဘယ်လမ်းကြောင်းနဲ့ ဘယ်နေရာကိုဝင်တိုက်မယ် ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရင်း ဆက်လက် တင်ပြပေးသွားပါဦးမယ် ။
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: 23W, tropical-storm, twentythree, weather.2Comments »
2 Responses to “အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဖြစ်လာသော 23W TWENTY-THREE”
TSR အဝါရောင်အဆင့် သတိပေးချက်ထုတ်ပြန် မြန်မာစံတော်ချိန် အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက် ဝဝး၃ဝ နာရီထုတ်ပြန်ချက်
NASA’s CloudSat satellite capturedaside view of 23W’s clouds on Oct. 26, and revealed some high, strong thunderstorm cloud tops almost9miles high.
The blue area along the top of the clouds indicates cloud ice, while the wavy blue lines on the bottom center of the image indicate intense rainfall — more than 1.18 inches/hour.
Credit: NASA/JPL/Colorado State Univ/NRL
« ယနေ့ညသန်းခေါင်တွင်မုန်တိုင်းဖြစ်လာမည့် 23W
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း 23W မြောက်မာရီယာနာကျွန်းစုကိုကျော်လာပြီ »